Posted by ညီလင်းသစ် au 9.11.08
kom: စိတ်ချမ်းသာရင်ြ့ပီးတာပါဘဲ။ ဆက်လက် အောင်မြင်ပါစေ
“လူတစ်ယောက်ကိုမုန်းရင် ကင်မရာတစ်လုံး ဝယ်ပေးလိုက်ပါ ” တဲ့။။သြော်ရက်
စက်လိုက်တာနော်။ သူ..ကျွန်မကို အဲဒါကြီးဝယ်ပေးထားတယ်လေ..။
Well said Ko NLT well written.
I know what you mean for I feel exactly the same.
မခင်ဦးမေ..စိတ်ကတော့ သူရောက်လာပြီးကတည်းက အတော်ချမ်းသာနေတယ်ဗျာ....ဟီး၊
မယုဝရီရေ...အဲဒါက ဖလင်ထည့်ရတဲ့ကင်မရာတွေအ တွက် Version ပါ၊ Digital camera တွေအတွက် version က ‘ လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ရင် တကြိမ်တခါ ဝယ်ရုံနဲ့ အကြာကြီးစိတ်ချမ်းသာစေမယ့် digital ကင်မရာဝယ်ပေးလိုက်ပါ ’ တဲ့....၊ :D
Everest....I am sure that you'd get it. Great minds think alike, don't they?